MODA | Article Detail | ကောက်ကြားအလှတွေနဲ့ Celebrity တို့ရဲ့ Swimsuit ဖက်ရှင်
ကောက်ကြားအလှတွေနဲ့ Celebrity တို့ရဲ့ Swimsuit ဖက်ရှင်
မျက်နှာအလှအပကိုသာမက Body ပိုင်းကိုပါအသားပေး ဂရုစိုက်လာကြတဲ့ Celebrity တွေကလွတ်လပ်စွာဖက်ရှင်ကျကျဝတ်ဆင်လာကြပါတယ်။ ဒီထဲမှာသူတို့ရဲ့ကောက်ကြောင်းပေါ်တဲ့ရေကူးဝတ်စုံအလှတွေကို အပြိုင်အဆိုင်တွေ့လာရပါတယ်။ ခရီးသွားရင်းဖြစ်ဖြစ် ရေကူးကန်မှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့အမိုက်စားရေကူးဝတ်စုံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကောက်ကြောင်းအလှတွေကပရိတ်သတ်တွေအတွက်တော့ရင်ဖိုစရာပါ။ လွတ်လပ်တဲ့အသွင်ဆောင်နေတဲ့ Celebrity လေးတွေရဲ့Swimsuit အလှကိုခံစားကြည့်ရှူနိုင်ဖို့ရာတစ်စုတစ်စည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Editor အကြိုက်ဆုံး TV Show ထဲက Iconic Outfit များ
လူငယ်တွေကြားမှာ TV Show တွေ Netflix Series တွေကအရမ်း လူကြိုက်များလာပြီး ဒီ TV Show တွေရဲ့ အမိုက်စား Plot တွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းထဲကသူတို့ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေက လူငယ်တွေအတွက်တင်မက လူလတ်ပိုင်း Fan တွေအတွက်ပါ Inspire ယူစရာဖြစ်လာတယ်။ တစ်ချို့ Character တွေဆို ဇာတ်လမ်းကို မသိရင်တောင်မှ သူ့ရဲ့ Outfit နဲ့ Style ကိုကြည့်ပြီး ဘယ် TV Show လဲဆိုတာသိနေကြပြီ။ မိန်းကလေးတွေအတွက်လည်း Millie Bobby Brown နဲ့ Nina Dobrev တို့ရဲ့ Style တွေကလည်း Aesthetic ဆန်တဲ့ Vibe တွေမို့ မိန်းကလေးတိုင်းအကြိုက်တွေ့နေကြတာပေါ့။ တကယ်လို့သင်လည်းသင့်ရဲ့ Style ကို Aesthetic ဆန်ဆန် Upgrade လုပ်ချင်တယ်ဆို TV Show တွေရဲ့ အမိုက်စား Outfit တွေကို Inspire ယူပြီး ပြန်လည်ဖန်တီးကြည့်လို့ရပါတယ်။ အဲ့ Netflix Series တွေထဲကမှ အရမ်းလည်း မိုက်တဲ့ Editor အကြိုက်ဆုံး Iconic Style လေးတွေကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
1980 ဝန်းကျင် Indiana မှာ ဇာတ်အိမ်တည်ထားတဲ့ ဒီ Horror Series ကို မကြည့်ဖူးရင်တောင် မသိတဲ့သူတော့မရှိသလောက်ပါပဲ။ Series တစ်ခုလုံးက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး Mystery ဆန်ပါတယ်။ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေရဲ့ ဖက်ရှင်ကလည်း 70's-80's Retro Signature Look တွေဖြစ်တဲ့ High-Waisted Trousers တွေ၊ Baggy Jeans တွေ၊ Overall တွေနဲ့ Stripes တွေကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ Print တွေဆိုရင်လည်း အပွင့်ကြီးကြီးနဲ့ အရောင်တောက်တောက် Graphic Print Collar-Shirt တွေကထင်ပေါ်နေပါတယ်။ Old-School Look တွေကိုကြိုက်သူများအတွက် လက်မလွတ်သင့်တဲ့ Fashion တွေပါ။
Riverdale Cast တွေကတော့ Sweet ဖြစ်တဲ့ Style နဲ့ Edgy ဖြစ်တဲ့ Style ကို ရောသမမွှေထားတဲ့ School Girl Fashion Vibe တွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာ Editor သဘောအကျဆုံးကတော့ Betty နဲ့ Cheryl ရဲ့ Outfit လေးတွေပါပဲ။ Betty ကတော့ ကိုယ်လုံးအလှကိုပေါ်လွင်စေတဲ့ Skinny Jeans၊ Chealsea Boots နဲ့ Leather Jacket လေးတွေကိုဝတ်လေ့ရှိတယ်။ Cheryl ကတော့ Cheerleader ပီပီ Tennis Skirt၊ Sport Jersey နဲ့ Bodyfit Top လေးတွေနဲ့ တွေ့ရများပေမယ့် အထာကျနေတာတော့အမှန်ပဲ။
Friends Series ထဲကဖက်ရှင်တွေထက်မိုက်တာတော့ မရှိတော့ဘူး။ နည်းနည်းတော့ Old School ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေမယ့် အခုချိန်ထိ Editor ကိုယ်တိုင်လည်း Daily Wear တွေမှာ Inspire ယူနေရဆဲ Fashion တွေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီ Friends Series ထဲမှာဆို မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းသုံးယောက်ရှိသလို သူတို့တွေရဲ့ ဖက်ရှင် Taste တွေကလည်းလုံးဝမတူပါဘူး။ Rachel ကတော့ Chic ဖြစ်တဲ့ Plaid Skirt၊ Turtle Neck နဲ့ Collared Shirt လေးတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သူပါ။ Phoebe ကတော့ Bohemian Princess လို့ပြောရအောင် Maxi Dress တွေ၊ Cardigan တွေနဲ့ Pattern Skirt လေးတွေကို ဝတ်ဆင်လေ့ရှိပြီး Monica ကတော့ Jeans တွေနဲ့ Tank Top တွေကိုသူ့ Signature Style ဖြစ်အောင်ဝတ်ပြသွားပါတယ်။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း The Vampire Diaries ရဲ့ Style တွေကတော့ Gothic၊ Grunge နဲ့ Edgy ဖြစ်တဲ့ အငွေ့အသက်တွေ လွှမ်းခြုံနေတာပါ။ Checked Print၊ Lace Dress နဲ့ Leather Jacket တွေကို အထာကျကျတွဲစပ်ထားပါတယ်။ အရောင်ကိုလည်း Dark Tones တွေဖြစ်တဲ့ Black၊ Maroon၊ Grey ကာလာတွေကို အဓိက Highlight လုပ်ထားပါတယ်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Dress လေးတွေနဲ့အရမ်း Sexy ကျနေတဲ့ မင်းသမီးတွေရဲ့အလှကတော့ ဂေါ်ထွက်နေတာပဲနော်။
Sweet and Cute လည်းဖြစ်ရမယ်၊ လုံလုံခြုံခြုံလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Lara Jeans ရဲ့ဖက်ရှင်လေးတွေကို သင်နှစ်သက်မှာပါ။ Lara Jeans ရဲ့ Outfit လေးတွေက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဆိုပေမယ့် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာကိုတော့ ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ပါဘူး။ အရောင်ဆိုရင်လည်း မျက်စိအေးစေမယ့် Pastel ကာလာလေးတွေ၊ Girly ကာလာလေးတွေကို အသုံးပြုထားပြီး Sweater တွေ၊ Bomber Jacket တွေနဲ့ သိုးမွေး Cardigan လေးတွေကိုလည်း တော်တော်များများ ဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။
Photo sources from Pinterest.
#MODA Celebrity Fashion
#TV Stars Outfits
BLACK PINK အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ချင်းစီကဘယ် Brand ရဲ့ Ambassador တွေလဲ
ဒိတ်ဒိတ်ကျဲဖြစ်နေတာလည်းမပြောနဲ့ Endorse လုပ်ထားတဲ့ Brand တွေကိုလည်း ကြည့်လိုက်ဦး
အခုချိန်မှာ BLACK PINK လို့ပြောလိုက်ရင် Korean နဲ့ Asian မှာတင်မကပဲတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာပါ ပရိသတ်တွေအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ Girl Band ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ သူတို့ရဲ့မြူးကြွတဲ့ Music အပြင်အဖွဲ့ဝင် အချောအလှလေးတွေဖြစ်တဲ့ Jennie၊ Lisa၊ Jisoo နဲ့ Rosé တို့ရဲ့ Fashionable ဖြစ်တဲ့ Style တွေကြောင့်လည်း အများကြားမှာ Iconic ဖြစ်တာပါ။
ဒီလို ငယ်ငယ်နဲ့အောင်မြင်တဲ့ Girl Band အတွက်တော့ International ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ Service တွေက Brand Endorsement တွေပြိုင်အဆိုင်လုပ်လာကြတယ်။ BLACK PINK တစ်ဖွဲ့လုံးကလည်း Multinational Brand ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Adidas၊ Samsung တို့ရဲ့ Brand Ambassador တွေဖြစ်သလို သူတို့တစ်ယောက်ချင်းဆီမှာလည်း Endorse လုပ်ထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင် Brand တွေရှိကြပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အလှတရား၊ ဖက်ရှင်နဲ့ Talent တွေကိုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ နိုင်ငံတကာ Luxry Fashion House ကြီးတွေရဲ့ မျက်စိကျစရာဖြစ်လာတာ ဆန်းတော့မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ Ambassador အဖြစ်လက်ခံလိုက်တဲ့ Brand ကြီးတွေရဲ့ Identitiy တွေက BLACK PINK လေး တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ Personal Style တွေ Traits တွေနဲ့ လိုက်ဖက်မှုရှိနေတာတော့အမှန်ပါ။
ကဲဒါဆို ဘယ်သူတွေက ဘယ်နာမည်ကျော် Brand ကြီးတွေရဲ့ Ambassador တွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကြည့်လိုက်တော့နော်။
Jennie ကို သူ့ရဲ့ အဆို Talent တစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ပဲ Unique ဖြစ်တဲ့ Fashion Taste ကြောင့်လည်း အားလုံးကကြွေနေရတာပါ။ Jennie ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ Chanel Brand ကတစ်ထပ်တည်း ပါလာတာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ French Fashion House ကြီး Chanel ရဲ့ Brand Ambassador မဖြစ်ခင်တည်းက Jennie က Chanel ကို အရမ်းကြိုက်တဲ့ အမာခံ Fan ပါ။ Young and Trendy ဖြစ်တဲ့ Jennie က Chanel ကိုအလှပဆုံး Represent လုပ်ပေးနိုင်သူပါ။
Rosé for Saint Laurent
Vocalist အချောအလှလေး Rosé ကို Korean Brand Ambassador အဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တာကတော့ အားလုံးနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ Yves Saint Laurent ပါ။ စည်းဘောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုတွန်းထုတ်ပြီး Creativity ဖြစ်တဲ့ Concept ကို အသားပေးတဲ့ Saint Laurent ဖို့ Rosé ရဲ့ Edgy ဖြစ်တဲ့ အသွင်အပြင်လေးက တစ်ထပ်တည်းဖြစ်နေစေတယ်လေ။
Lisa for Celine
Girl Band ရဲ့ အငယ်ဆုံးလေး Lisa ကတော့ Member ထဲမှာ Instagram Follower အများဆုံးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ Lisa ကသွက်လက်တယ်၊ Strong ဖြစ်တယ်၊ ရက်ရောတဲ့ Personality ရှိသူမို့ French Fashion House Celine ကသဘောကျသွားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Celine ရဲ့ Latest Collection တွေကလည် Trendy ဖြစ်ပြီး Vibrant ဖြစ်တဲ့ အပြင်အဆင်တွေကြောင့် Lisa ရဲ့ Ambassador Position နဲ့ဆိုကွက်တိပဲပေါ့။
BLACK PINK အဖွဲ့ရဲ့ အသက်အကြီးဆုံး အဖွဲ့ဝင်လေး Jisoo ကတော့ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်ခြင်းနဲ့ Classy ဖြစ်တဲ့၊ Girly ဖြစ်တဲ့ ကောင်မလေးမို့ Elegance ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ Dior ရဲ့ Korean Ambassador ဖြစ်လာပါတယ်။ Dior ရဲ့ Clothing၊ Perfume နဲ့ Cosmetic Line တွေက မိန်းကလေးဆန်ဆန် Jisoo ရဲ့ Style နဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျနေပါတယ်။ French Fashion House ကြီး Dior ကတော့ ရွေးချယ်တာမှန်ကန်တယ်ပြောရမှာပါ။
Lisa ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ စင်မြင့်ထက်က အလန်းစားဖက်ရှင်များ
Lisa ကတော့ အရုပ်မလေးတစ်ရုပ်လို အမြဲလှနေတာပါပဲ
ပရိသတ်များစွာရဲ့ချစ်ခင်မှူနဲ့အတူ အောင်မြင်မှူတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Black Pink အဖွဲ့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Lisa ဟာ ထူးခြားလှပတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ သူမရဲ့Talent တွေကြောင့် လူချစ်လူခင်အရမ်းကိုပေါများတဲ့ Idol လေးတစ်ယောက်အဖြစ် အားလုံးလက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်အရင်း Lalisa Manoban ဆိုတဲ့ အသက် ၂၃နှစ်အရွယ် သူမဟာ ထိုင်းနိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ YG Entertainment လက်အောက်က Blackpink girl band ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပါ။ လှပချောမောပြီး Talent အပြည့်နဲ့ အဆိုရောအကဘက်မှာပါ ထူးချွန်ကြတဲ့ Blackpink အဖွဲ့ဟာ အချိန်တိုတွင်းမှာပဲ အောင်မြင်ကျော်ကြားလူကြိုက်များပြီး ကမ္ဘာအနှံ့ကပရိသတ်များစွာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ MV နဲ့ Stage Performance တွေမှာ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ဖက်ရှင်တွေ ဆံပင်ပုံစံတွေကလည်း သူတို့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေများစွာကို Trend တစ်ခုလိုဖြစ်စေတဲ့အထိဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တာ အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒီထဲကမှ စင်မြင့်ထက်ကဖျော်ဖြေပွဲတွေမှာ Lisa ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ဖက်ရှင်တွေကလည်း တော်တော်လေးကို သူမနဲ့လိုက်ဖက်ပြီး ဆွဲဆောင်မှူရှိလွန်းတာတွေ့ရမှာပါ။ဒါကြောင့်မို့ Lisa ဝတ်ဆင်ခဲ့သမျှထဲကမှ လှပထူးခြားပြီး Stand Out ဖြစ်နေတဲ့ စင်မြင့်ထက်က ဖက်ရှင်တချို့ကို သူမကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ရွေးချယ်စုစည်းပြီးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1.All White with Denim
ဇွန်လ၃၀ ရက်နေ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က MBC Music Core မှာ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ အပေါ်အောက်အဖြူဝမ်းဆက်ကိုမှ Oversize Denim ထပ်ဝတ်ထားတဲ့ Outfit လေးကလည်း သူမနဲ့အရမ်းကို လိုက်ဖက်ခဲ့တဲ့ Stage Outfit တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖျော်ဖြေပွဲမှာ တစ်ဖွဲ့လုံးက အဖြူကိုအသားပေး ဝတ်ဆင်ထားကြတာဖြစ်ပြီး Lisa ကိုယ်တိုင်လည်း ဂါဝန်အဖြူ ၊ ဖိနပ်အဖြူ နဲ့ အဖြူရောင် accessories လေးတွေကိုဝတ်ဆင်ထားပြီး ဂျင်းအင်္ကျီအပေါ်ထပ်နဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးလှပနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
2. Signature Pink
အဖွဲ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ပန်းရောင်လေးတွေကို တခါတရံ မပါမဖြစ် ဝတ်ဆင်တတ်ကြတတ်ကြတာသတိထားမိမှာပါ။ ဒီတစ်ခေါက် Stage Outfit မှာတော့ Lisa က တကိုယ်လုံးကို ပန်းရောင်တွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားခဲ့ပြီး လက်အိတ်ကအစ ပန်းရောင်လေးနဲ့ပါ။ သူမရဲ့ဝင်းမွတ်တဲ့အသားအရည်နဲ့ ပန်းရောင်ကအတော်လေးလိုက်ဖက်နေပြီး ဒီဝတ်စုံက Lisa ရဲ့ Iconic ဝတ်စုံတစ်ခုအဖြစ်အချိန်အတော်ကြာလေးရပ်တည်ခဲ့ပါသေးတယ်။
3. Red Crop Top and Diamond Accessories
နောက်ထပ် အမိုက်ဆုံး Stage Outfit တစ်ခုကိုဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ Melon music award 2018 မှာ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ အနီရောင် Snake Print အင်္ကျီကိုမှ Christopher Kane ရဲ့ Crystal ကြိုးလေးတွေပါတဲ့ အပေါ်ထပ် ကိုထပ်ဝတ်ထားတဲ့ ဝတ်စုံလေးပါပဲ။ အဲဒီအပေါ်က Crystal Fringe Topရဲ့ တန်ဖိုးဟာ $ 2295 (မြန်မာငွေ သိန်း၃၀ကျော်) တန်ဖိုးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
4.Green Floral Dress with Corset
အစိမ်းရောင် ပန်းပွင့်လေးတွေပါတဲ့ Dress ကိုမှ ခါးနေရာမှာ Corset စည်းထားတဲ့ပုံစံလေးကတော့ Asian Artist Award 2016 မှာ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ Stage Outfitလေးပါ ။ နဂို သွယ်လျပြီးသားခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်လေးဖြစ်ပေမယ့် Corsetနဲ့လည်း အတော်လေးလိုက်ဖက်တာတွေ့ရပြီး သူမကို အသက်ရှိနေတဲ့ အရုပ်မလေးတစ်ရုပ်အလားလှပနေစေတာတွေ့ရမှာပါ။
5. White Croptop and Gold Accessories
SBS Gayo Daejun (2017) မှာ Lisa ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ အဖြူရောင် လက်ဖောင်း Crptop အင်္ကျီနဲ့ အနက်နဲ့ရွှေရောင်ကနုတ်လေးတွေပါတဲ့ ဘောင်းဘီတိုကိုတွဲဖက်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံကလည်း သူမနဲ့ အရမ်းကိုလိုက်ဖက်ပေါ်လွင်တဲ့ Stage outfit တွေထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ အဲဒါကိုမှ ရွှေရောင်ကြိုးလေးတွေကို Accessories အနေနဲ့ မွမ်းမံထားပြီး ရွှေရောင် နားကွင်းကြီးတပ်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံက သူမနဲ့တော်တော်လေးကို ကြည့်လို့လှတဲ့ စင်မြင့်ထက်ကဖက်ရှင်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ အသေအချာပါ။